Dowladda F.S oo sanad kadib shaacisay tirade dadkii Alshabaab ku laayeen guriga Garsoorka – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Dowladda F.S oo sanad kadib shaacisay tirade dadkii Alshabaab ku laayeen guriga Garsoorka
Muqdisho – Mareeg.com: Dowladda Soomaaliya ayaa sanad kadib weerarkii Alshabaab ku qaadday guriga garsoorka magaalada Muqdisho shaacisay tirda rasmiga ah ee dadkii halkaas lagu laayey, iyadoo horay loo qariyey tirada saxda ah.
Arrintaan ayaa gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliya Abuukaate Ceydiid C/llaahi Ilka-xanaf wuxuu ka sheegay xus iyo baroordiiq oo loo sameeyey dadkii 14-kii Apriil ee sanadkii hore 2013 Alshabaab ku dileen xarrunta maxkamadda gobolka Banaadir oo iminka xarrun u ah inta badan maxkamadaha muhiimka ah ee dalka.
Abuukaate Ilka-xanaf ayaa sheegay in weerarkii sanadkii hore Alshabaab ku qaadaay maxkamadda gobolka Banaadir oo isagu ka mid ahaa dadkii ka badbaaday ay ku dhinteen ilaa 56 ruux oo isugu jiray shaqaalaha dowladda, qareeno iyo dad dacwado isu heystay.
Gudoomiyaha ayaa sheegay in sababta loo beegsaday garsoorka ee loo laayey dadkii ka shaqeynayey iyo dadka oo shacab ah ay tahay iyadoo garsoorka Soomaaliya howlgalay, arrinkaasna Alshabaab ka horjeedaan.
Wuxuu sheegay Ilka-xanaf in rag ka tirsan Alshabaab uu soo wacay u sheegay inuu iyaga u yahay cadow, maadaama uu madax u yahay garsoorka dalka.
Xeer ilaaliyaha guud ee Qaranka C/qaadir Maxamed Muuse oo isaguna goobta ka hadlay ayaa sheegay in garsoorka Soomaaliya u dayacanyahay sidii u dayacnaa sanadkii hore, markaasoo dhowr nin oo ka tirsan qarax iyo weerar ku galeen xarrunta maxkamadda gobolka Banaadir, islamarkaana ku dileen in ka badan 50 qof.
Madweynaha Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta ka qeyb-galay baroor-diiq loo sameynayay weerarkii argagixiso ee sanad kahor lagu qaaday xarunta maxkamadda gobolka Banaadir.
Dad kor u dhaafaya soddon qof ayaa ku dhimatay weerar ay al-Shabaab 14-kii April sanadkii hore ay ku qaadday xarunta maxkamadda gobolka ee degmada Xamarweyne.
Madaxweynaha Soomaaliya, Xasan Sheekh Max’ud oo xuska iyo baroodiiqda ka qeybgalay ayaa ka tacsiyeeyay dhammaan dadkii ku dhintay weerarka, wuxuuna sheegay in garsoorka uu kaalin muhiin ah uga jiro dalka.
Wasiirka caddaaladda iyo dastuurka, Faarax Cabduqaadir oo isna ka hadlay baroor-diiqda ayaa sheegay in wasaaraddu ay waddo qorshe lagu taakuleynayo qoysaskii dhibaatada ka soo gaartay weerarkii maxkamadda.
Horay waxaa si aan rasmi aheyn loo sheegay in weerarkaas oo socday muddo ilaa labo saac ah ay ku dhinteen tiro u dhaxeysa 20- ilaa 30 ruux.
Somaliland: Buhodle Mayor Resigns
Prof. Jawaari oo Rome la kulmay dhigiisa Taliyaaniga